Mu’assasada Al-minhaaj ee Galdogob oo kulan u qabatay qurbajoogta ka soo jeeda deegaanadaasi (Sawiro) – Radio Muqdisho
Mu’assasada Al-minhaaj ee Galdogob oo kulan u qabatay qurbajoogta ka soo jeeda deegaanadaasi (Sawiro)
Mu’assasada Alminhaaj degmada Galdogob ee gobolka Mudug ayaa waxaa ay u samaysay kulan qaar kamid qurbajoogta deegaanka oo ka kala timid daafaha aduunka, ayadoo lagu jiro fasaxii qaboobaha ee wadamada Yurub iyo Mareykanka.
Kulanka ayaa lagu soo bandhigay daraasad ay Mu’assasadu ka samaysay sidii deegaanka lagu horumarin lahaa iyo sidoo kale waxqabadkii Mu’assasada mudadii koobnayd oo ay ka shaqaynaysay deegaanka.
Qurbajoogta ayaa dhankooda amaanay soona dhaweeyey waxqabadka Mu’assasada soona jeediyey talooyin badan oo wax ku ool ah.
Fursadaha wax ku oolka ah oo uu haysto Deegaanada ka tirsan degmada Galdogob ee gobolka Mudug ayaa waxaa kamid ah inay jirto Jaalliyad balaaran oo daafaha aduunka kala joogta, halka qaarkood qoysaskoodu u dagan yihiin oo ay soo booqdaan xiliyada fasaxa ah, qaarna ay siyaabo kale u yimaadaan.
Qurbajoogta kulanka ka qeyb gashay oo ka kala timid Afrika , Ameerika iyo Yurub ayaa aad ugu riyaaqay macluumaadka ay ka heleen kulanka iyo warbixinta soona dhaweeyey kulamada noocaan oo kale ah.
Mu’assasada ayaa dhankeeda ka dalbatay in qurbajoogtu ay khibradahooda iyo aqoontooda uga faa’iideeyaan deeganadan hoos yimaada degmada Goldogob ee gobolka Mudug.